I-ODM ne-OEM Service | Angeza
Ikhaya > Ukugcina esimweni
Ukuhlelwa Komkhiqizo → Ukuhlolwa kwesampula → Umkhiqizo → Ukuhlola ikhwalithi → Ukuhambisa
Siyakwazi ukuhlinzeka ngezinkulungwane zazo zonke i-Hardware yefenisha engahlangabezana nesimo sendawo, izindawo zokuzijabulisa, izindlu kanye nabanye. Kunobubanzi obuhlukile ngekhwalithi nentengo yomkhiqizo wohlobo olulodwa emakethe ngayinye. Ukwehlukahluka komkhiqizo kunganelisa izimfuno zakho.
Sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamaphoyinti wentengo ahlukahlukene azokwenza kube lula kuwe ukwamukela izidingo zohlobo oluthile lwabakhona namakhasimende akhona.
Sinikeza amasampula wamahhala asuselwa kwizidingo zakho ezithile zokuhlola ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Kubalulekile kithi ukuthola lokho okudingayo ngqo.
Sinabasabalalisi abaningi emhlabeni wonke futhi sijabulela idumela eliphakeme e-US, eYurophu nase-Asia. Njengamanje sinenethiwekhi yokusabalalisa emazweni angaphezu kwangu-20 ngaphezulu kwethu, eYurophu nase-Asia. Sicela usazise ukuthi yini esingakwenzela yona. Uyemukelwa ukuze ube ngumsabalalisi wethu omusha emakethe yakho, ubheke phambili ekubambisaneni okudala isikhathi eside!
Sinikezela ngokukhululeka futhi kube kuhle ngemuva kwenkonzo yokuthi zonke izimpahla ziphinde zithengisiwe, uma kukhona icala ngathi, sizoyixazulula inkinga okokuqala ngemuva kokunikeza ubufakazi bemininingwane yangaphambilini.